BNI sy Kapital Plus Plus : misokatra ny fampiasam-bola ho an’ny rehetra | NewsMada
BNI sy Kapital Plus Plus : misokatra ny fampiasam-bola ho an’ny rehetra
Ho an’ny fampiroboroboana ny fandraharahana eto an-toerana, sokafana ho an’ny rehetra ny fandraisana anjara amin’ny fampiasam-bola. Tompon-kevitra amin’izany politika vaovao izany ny Kapital Plus Plus, miara-miombon’antoka amin’ny banky BNI Madagascar.
Olana hatramin’izay eto amintsika ny fahitana famatsiam-bola raha hanangana tetikasa iray. Tsy mora ny fahitana izay famatsiam-bola izay, koa mampahalala politika fiantsoana ny rehetra izay te hampiasa vola na « crowdfunding » ny Kapital Plus Plus. Fomba iray efa fampiasa any ivelany izany, ho fandraisana anjara amina tetikasa iray misy mpanolotra. Ny taona 2015, 34 miliara dolara ny renivola voaangona tamin’izany ka 2,5 miliara dolara, mitovy amin’izao atao eto amintsika izao. Izany hoe, olon-tsotra, orinasa na fikambanana afaka mandray anjara amina renivola hoenti-miasa ho an’ny tetikasa iray.
Ny manana tetikasa, manolotra izany amin’ny Kapital Plus Plus, izay manao fanadihadiana rehetra miaraka amin’ny teknisianina isan-tsokajiny. Zahana akaiky ireo izay hita fa mitondra fampandrosoana marina, mahakasika ny fiainan’ny maro anisa : fambolena sy fiompiana, indostria, angovo azo havaozina, fizahantany sy fandraisam-bahiny, fanamboarana trano, asa tanana, teknolojia fifandraisan-davitra.
Afaka mandray anjara ny mpianatra
“Efa nisy tetikasa 200 voarainay. Taorian’ny famakafakana rehetra, 15 hatramin’izao no hiantsoana mpandray anjara amin’izay te hampiasa vola. Mbola mitohy ihany ny fanadihadiana miaraka amin’ny tolokevitra ho fanatsarana ny tetikasa. Misy tetikasa mitovitovy ka tsara raha mitambatra mba hampantanjaka azy. Ny amin’ny fandraisana anjara amin’ny renivola indray, miankina amin’ny tetikasa fa ny tanjona ny hahamora ny fandraisana anjaran’ny rehetra, na mpianatra aza”, hoy ny filohan’ny Kapital Plus Plus, Rasoarahona Christian.
Andraikitry ny BNI amin’izao fiaraha-miasa izao ny fanomezan-toky ho an’ny rehetra fa tsara antoka ny volany ao amin’ny banky. Manampy ny tompon’ny tetikasa koa izany, hahazoany miditra amin’ny tolotra rehetra ho an’ny fandraharahana ao amin’ny BNI. Manohana izay tompon’ny tetikasa ny BNI, manome tolokevitra amin’izay tokony hampahomby ny asa. Ao amin’ny www.kapital-plusplus.com ny hizahana ny tambajotra.
Tapa-bolana taorian’ny nahitana ny razana : Hampodiana anio ny fatin’i Alana Cutland 21/08/2019
Communales : Vers un budget serré 21/08/2019
Toamasina: nakatona ny orinasa MPO 21/08/2019
Ladoany – Laharana maitso 360: hangataham-panazavana, hiadiana amin’ny kolikoly… 21/08/2019
Toamasina: havadika sakafom-biby ny lafarinina lany daty 21/08/2019
Fakafaka: fahamarinana, mbola lalain’ny Malagasy?